प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा थप समस्या, मध्यराति त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना – www.agnijwala.com
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा थप समस्या, मध्यराति त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल भर्ना भएका छन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी आज अस्पताल भर्ना भएका हुन् । सोमबार बिहान २ बजेतिर एक्कासी छातिमा समस्या देखिएपछि उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अोलीको अहिले शिक्षण अस्पतालभित्र रहेको मनमोहन हार्ट सेन्टरमा राखेर उपचार भइरहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अस्पताल पुर्याएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा अहिले मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अरुण सायमी, निजी चिकित्सक डा. विद्या सिंह र छाती रोग विशेषज्ञ सन्त दासलगायतको टोली खटिएको छ ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री अोली केहि दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गराइनेछ